” တို.ဆေး ” ဆိုတာ တကယ်လား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ” တို.ဆေး ” ဆိုတာ တကယ်လား ?
” တို.ဆေး ” ဆိုတာ တကယ်လား ?
Posted by မောင်ရိုး on Mar 12, 2012 in Myanma News, News | 24 comments
ဆာမိရဲ.အသိတစ်ယောက်က ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ပါ ။ဒီနေ. မင်္ဂလာဒုံဂေါက်ကွင်းနားက ကောင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာမမျှော်
လင်.ဘဲတွေ.တော. ဆာမိကိုလက်ဘက်ရည်တိုက်ပါတယ် ။ ရဲ ဆီကစားရခဲလို.ပလာတာနဲ.ဆိတ်ကြော်ပါစားရင်း ဟိုသတင်း
ဒီသတင်းတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ် …။သတင်းကတော.သိပ်မထူးလှပါဘူး ၊ မြို.သစ်တွေ နယ်မြို.တွေမှာ မကြာခဏဖြစ်နေ
တို.ဆေးပါ ၊ တို.ဆေးနဲ.တို.ပြီး ရွှေ ငွေ တစ်ခုခု လိမ်လည်ယူသွားတဲ.ကိစ္စပါ ။ခက်တာက ဒီအမှုမျိုးက တရားခံဖမ်းမိတယ်
လို. မကြားဘူးပါဘူး(ဖမ်းမိချင်လည်းဖမ်းမိမှာပါ )။ဖြစ်စဉ်ကတော. လွန်ခဲ.တဲ.ရက်အနည်းငယ်က ရွှေပြည်သာမြို.သစ်ရဲ.
အသက်ခြောက်ဆယ်လောက်ရှိတဲ.အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးကို (သူတို.အဆို) တို.ဆေးနဲ.တို.ပြီးတစ်ကျပ်သား ရွှေဆွဲကြိုးကို
ဖြုတ်ခိုင်းပါသတဲ.၊ ပြီးတော.စာအိပ်ထဲထည်.ပြီးအိမ်ရောက်မှ ဖွင်.ကြည်.ခိုင်းသတဲ. ။အိမ်ရောက်တော.ဖွင်.ကြည်.တဲ.အခါ
စာအိပ်ထဲမှာ ကျေက်ခဲတွေဘဲပါ ပါတယ် ..။အခင်းဖြစ်ပွာတဲ.အချိန်က နံနက်(၇)နာရီခွဲလောက်ဆိုတော.လူစည်ကားတဲ.
အချိန်ပါ။ ဆာမိအနေနဲ.ကတော. အောက်လမ်းတွေ အထက်လမ်းတွေ ဂမ္ဘီရတွေ ခဏဖယ်ထားပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေကို
သဘာဝကျကျစဉ်းစားချင်တာပါဘဲ ။ဒီပညာတွေကိုမယုံဘူး ၊ မရှိဘူးလို.မဆိုလိုပါဘူး ….ဒါပေမဲ.ဒီသခိုးဂျပိုးတွေက
ဒီလိုပညာတတ်တယ်လို.တော.မယူဆချင်ဘူး ။ မူးယစ်ဆေးတစ်ခုခုနဲ. ၊ လက်လှည်.မျက်လှည်.ပညာတွေသုံးသွားတယ်
လို.ထင်တာပါ ။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေမှာခံခဲ.ရသူတွေကယောက်ကျားတွေမဟုတ်ကြပါဘူး ။ အသက်ကြီးကြီး ထုံထုံထိုင်းထိုင်း
မိန်းမကြီးတွေပါ ။ ခက်နေတာက သက်ဆိုင်ရာရဲတွေကိုယ်တိုင်က အောက်လမ်းပညာနဲ.လုပ်တဲ. “တို.ဆေး”လို.
ယုံကြည်နေကြတာကြောင်.အမှုကို ဖိဖိစီးစီးမလိုက်ကြတာပါဘဲ ။ဒါကြောင်. ဒီလိုအမှုမျိုးတွေပေါ်တယ်လို.မကြားဘူးတာပေါ.
ဒါမျိုးတွေက လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲသားတွေဘဲ အများစုခံရတာပါ။
ကဲ ရွာသူ ရွာသားတွေရောဘယ်လိုသူဆကြလဲဗျာ ….။
အတွေ.အကြုံလေးတွေနဲ. ယူဆချက်လေးတွေပြောပေးကြပါဦး ။
မသိတဲ့ အကြောင်းအရာမို့ မဝေဖန်လိုတော့ပါဘူး…။
ဒါပေမယ့် တို့ဆေးနဲ့လုပ်ပြီး လုယက်လိမ်ညာခံရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက တချို့က စိတ်ညှို့ခံရတာပါ။
စိတ်ညှို့တယ်ဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ နည်းပညာတမျိုးပါပဲ။
ကောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံးရင် တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။
မဟုတ်က ဟုတ်က ပညာတွေအလွန်များတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အဲဒီ အသုံးကျတဲ့ စိတ်ညှို့ပညာတော့ မထွန်းကားဘူး။
ခက်တာက ဒီရဲတွေကိုယ်တိုင်က အောက်လမ်းပညာလို.ယုံကြည်နေတာ ။
စိတ်ညှို.ခြင်းအတတ်ပညာကို ဒီလူလိမ်တွေဘယ်လိုများလေ.လာထားပါလိမ်. ။
မြန်မာ.ရိုးရာ စိတ်ညှို.ပညာများရှိနေသလားဘဲ …..။
ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ ပြောရရင်… တို့လိုက် ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပွတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အငွေ့ထွက်ပါတယ်တဲ့… (တစ်ချို့ ကတော့ address card မှာ ပွတ်ပြီးပေးတယ်) အဲ့အငွေ့ ကို ရှု မိရင် အသိစိတ် လွတ် သလိုဖြစ်သွားပြီး ဘေးက ပြောသမျှ အဟုတ်မှတ် ပြီး ယောင်ရမ်းပြီး လိုက်လုပ် တတ်ပါသတဲ့ ….။
သေချာ တော့ မကြုံဖူးပါဘူး။ လက်တွေ့ကြုံဖူးတဲ့သူပြောတာတော့ … ဘာမှ စဉ်းစားလို့ကိုမရတော့ဘူး …. ဒီလို ပဲ သူက ပေး ဆိုတာနဲ့ ပေးလိုက်မိတယ်… လို့ ပြောပါတယ်။ …
စိတ်ညှို့ ပညာ ဆိုရင်တော့ တော်တော် အစွမ်းထက် တာပဲနော့ … အလွန်ကြောက်စရာပါ .. ပညာအလွဲသုံးမှု ပေါ့နော့။
လိပ်စာကဒ်ပေးရင် သတိထား – Hoax
ကာယကံရှင်ဟာ.. ခံလိုက်ရလို့.. ရောချပြီး.. ဖာထေးပြောနေတယ်ထင်ပါကြောင်း…
ကိုခိုင် ပြောတာ ဒီပြဿနာ အားလုံးရဲ့ အဖြေ လို့ ထင်ပါတယ် …။
ကိုယ် ညံ့လို့ ခံလိုက်ရပြီးမှ ကိုယ်ညံ့တာ၊ နုံတာ လူသိမှာ စိုးလို့ ၊ ရှက်ပြီး
ရောတော ဖေါတော လုပ်လိုက်တာလို့ ထင်ကြေးနဲ့ သုံးသပ်မိပါကြောင်း …။
သဂျီးတင်ထားတဲ့ပုံက..ရှုရင်မူး စားရင်ရူး ဆိုကြတဲ့
I don’t believe that kind of funny thing, should alert any time.
I’m fully agreed with (Ko) Kai said.
နေချာ နဲ့ ခေဲးအိုးစ့် ဘက်မှာတော့ မကြားဘူးပေမယ့်
အော်ဒါ မက်ဂျစ် မှာတော့ ရှိတယ်ဗျ…
ဟစ်ပနိုတိုက်ဇ် ဆိုလားပဲ ..
ဒက်သ် ဘက်ကတော့ ခာ့စ်နဲ့ …ဘလက်ရိန်းကလောက် လောက်တော့
ဒါတွေဘာလို့ သိနေ ပြောနေလဲဆို ..
တကယ်တော့ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း ….
ကိုယ့်ရှေ့မှာ ချထားတဲ့ ကိုပိုင်တဲ့ စက်ဘီးကိုတော့ဘယ်သူကမှ အလကားပေးမှာတော့ မဟုတ်ဖူး?????
အဲ့ဒီ အမျိးသမီးက ကျတော့် company ရှေ့က၊ ကွမ်းယာရောင်းတာ။
မေးကြည့်တော့အဲ့ဒီလူက လက်ကိုင်ပ၀ါကို ထုတ်လိုက်ပြီး မကြာဘူး သူမ မူးနောက်နောက် ဖြစ်လာပြီး
့အဲ့ဒီလူကို ကြောင်ကြည့်နေမိတာဘဲ မှတ်မိတယ်တဲ့…….ကြည့်လိုက်တော့ စီးတော်ယဉ် မရှိတော့မှ တို့ဆေး
ယောက်ကျားနဲ့ ကွိုင်တက်တော့တာဘဲ………ဒီလိုမျိုးကျတော့ Guess လုပ်ကြည့်ကြပါအုန်းဗျိ့………
ဒါမိုးနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် သဂျီးက လွှတ် စိတ်ဝင်စားတာကလား…
သူ့မှာ ပီယဆေးရှိရဲ့ ….(လက်ထောက်ချတာ)..
အနောက်တိုင်း အလို အရတော့ …ချာမ်း လို့ခေါ်တဲ့ စပဲလ် ပေါ့ဗျာ …
ဂျင်းနီးစ်အင်သည် ဘော်တယ်လ် က ဒါမျိုးအနွယ်ဝင်တွေပေါ့…..
အရှေ့အလည်ပိုင်း နဲ့ အီဂျစ်ပြည်က မြစ်ဖျားခံတဲ့ မှော်တွေပေါ့ဗျာ…
အနောက်တိုင်း အခြေစိုက် လိုက်ဖ်မက်ဂျစ် အလို အရတော့ …
ဘလက်ဇ်စင်း ခေါ်ရမယ်ထင့်… သူကတော့ နည်းနည်း ပရိုတက်ရှင်းဘက်
ဆပ်ဖ် ဒီဖန့်စ် ဆန်တဲ့ မှော်မျိုးဗျ …. မာန့်ခ် လောက် လိုက်ဗေးရီးယန်း လောက်ကစလို့
အိန်ဂျယ်လ် အဆင့်ထိကို ရှိတာမျိုးဗျို့ …. ဒီဗိုင်းရှီးလ် ဖန်ဆီးတဲ့အဆင့်
ရီအင်ကာနေးရှင်း လုပ်တဲ့အဆင့် ဆိုရင်တော့ အတော်မြင့်သွားပြီ ….
အဲ့ … ရီအင်ကာနေးရှင်း ဆိုလို့ …ဖီးနစ်စ် နဲ့ မရောနဲ့ …ဖီးနစ်စ်က
နေးချား အနွယ်ဝင်တွေဗျ … သူတို့ကတော့ အဲလ်ဖ် တွေ ကြီးစိုးတာများပါတယ်…
ယူနီကွန်း အစ ဖယ်လ်ရီ ဒရက်ဂွန် အဆုံး …ဒီထဲ အကျုံးဝင်တော့သကိုး ….
ဒါတွေမရှိဝူး မပြောနဲ့နော….. ရှိပါ့ ရှိပါ့ …
ဘာလို့ ဒါတွေပြောနိုင်သလဲဆို …တကယ်တော့ တကယ်တော့…..
လိုက်ဘေးရီးယန်း ဆိုလို့ …အနှီ လိုက်ဖ် မက်ဂျစ် အနွယ်ဝင်တွေဟာ
သေဆုံးခြင်းမက်ဂျစ် ဒတ်သ် နဲ့ ကျောင်းတော်ရန်စ ရှိသကိုးဗျ…..
ရှိဆို … ဗန်ပါးယား တွေကြောင့်ပေါ့ ….
ဥရောပမှာ အလယ်ခေတ်က ခေါင်းထောင်ခဲ့တဲ့ ဒတ်သ် မက်ဂျစ် ကို ကြားဖူးပေမပေါ့…
အထင်ရှားဆုံး ကတော့ ဒရက်ဂူလာ မြို့စားကြီးပါပဲဗျာ ….
သည်တော့ ..လိုက်ဖ်မက်ဂျစ်ရှန်းတွေဟာ ..မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း နဲ့
နီးစပ်နီးကပ်မှုရှိတဲ့ ..မာန့်ခ် တွေ လိုက်ဘေးရီးယန်းတွေကို
မှော်ပညာ ဖြန့်ဖြူးပြီး ..လူသားတွေကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသကိုးဗျ….
မက်ဒီဗယ်လ် ဂျိဒိုင်း ကို ကြည့်ရင် ဒါတွေ မငြင်းသာတဲ့အချက်တွေ တွေ့ရဦးမယ်ဗျာ…
အဲ့သည့်ထက် ပိုပြောလို့ မကောင်းတော့ပေမယ့် နည်းနည်းလေး ဟင့်စ့်ပေးရရင်တော့…
နည်းနည်းရှေးပိုကျတဲ့ … တမ်ပလာ နိုက်တွေအကြောင်း ရှာဖတ်ပါ လို့ …ပြောချင်ရဲ့ဗျာ….
ကျုပ် တဖွဖွ အီတာလီယာ ဂိုးချင်တယ်ပြောနေတာကို ထောက်ရှုရင် မြင်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ….
ဒါတွေဘာလို့ ပြောရသလဲဆို ….ဒီဆိုက်ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့
သဂျီးလိုပဲ ..ကျုပ်ဟာလည်း ..ကျုပ်ဟာလည်း….
အိမ်မြှောင် အမြီး နှစ်ခွဆိုရင်…တော်တော် အသုံးဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျ
အိမ်မြှောင်အမြီး နှစ်ခွ ဆိုတာ ကို ဆရာသော်တာဆွေ ရဲ့မခင်နှင်းဆီ ဝတ်ထု ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ ။ အပြင်မှာ တစ်ကယ်တွေ့ လို့ ရှိရင်တောင် ၊ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပမလား ဗျာ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မုန်ညှင်းဆီ သာ သုံး ။ ဟီဟိ
ိကိုဆာမိ ရေ ၊ ဆလမ်မာလေးကွန်းပါ ။ အခမဲ့ ကြေငြာသွားပါတယ် ခင်ဗျ
အိမ်မြှောင်အမြီးနှစ်ခွဆိုတာ ဆေးဖော်ရတာဆိုရင်တော့ ဆေးရုံတွေမှာ အပေါသားလားဗျ…….
ကိုဆာမိရေ ..ကျွန်မလည်း .. မကြုံဖူးသေးလို့ .. မယုံပေမယ့် … အဖေဖြစ်သူကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
ကျောင်းသား ဘ၀ကပါတဲ့ … မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာသူ သူစိမ်းကို သူမြင်နေတယ် … သူ့မျက်လုံးတွေကလည်း စူးရှပြီး .. တစ်ခုခု လုတော့ ၊ လိမ်တော့မယ်လို့ မသိစိတ်က ထင်နေလို့ … ဆွဲကြိုးနဲ့ နာရီကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ရင်းပဲ …. လွယ်အိတ်ထဲ ချွတ်ထည့်ဖွက်လိုက်ပါသတဲ့ … ဒါနဲ့ပဲ ဟိုလူနဲ့ ဘေးတိုက်လမ်းလျှောက်ရင်း … သူ့ပခုံးကို ပုတ်ပြီး … ပေးလွယ်အိတ်ဆို ယူသွားတာ .. အသာတကြည် (ငြင်းဆန်လိုစိတ်မရှိပဲ ) ပေးလိုက်ပါသတဲ့ …. လမ်းလယ်ခေါင်မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပခုံးလာပုတ်တော့မှ .. သတိဝင်ပြီး … လွယ်အိတ်ကြည့်တော့ .. မရှိတော့ဘူးတဲ့လေ … ။ပြောရလို့သာ ကြားတယ် .. မယုံတော့ မယုံခဲ့ဘူး ..ဒါပေမယ့် … သူကလည်း မလိမ်ပဲ .. အမှန်ပြောတဲ့ပုံပဲ ..
ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ … တို့ဆေးဆိုတာထက် …. စိတ်ညှို့ပညာလို့ ထင်ပါတယ် … ။
အရင်က အဲ့ဒီလို ပညာရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ရယ် … စိတ်ဓါတ်ပြင်းပျသူတွေကျင့်လျှင် .. ပိုမိုလွယ်ကူတယ်ဆိုတာရယ်ကြောင့် …ပတ်သတ်ရာ .. စာအုပ်တွေ ဟိုဖတ် ဒီဖတ်လုပ်ဖူးပါတယ် … ။
အဓိကကတော့ သမာဓိအားကောင်းအောင် မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာ … အာရုံစုစည်းတာပါ … ။ မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ တဖက်လူရဲ့ မနောစိတ်ကို … နှိုးဆွတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် … ။ အိမ်က ကျွန်မကို … ဂေါက်သွားမှာ စိုးလို့…အဲ့ဒီ မနောကျင့်စဉ်ကို … စာအုပ်လေးဖတ်နေတုန်း .. စာအုပ်တွေ ..အပြောင်ရှင်းသွားပါတယ် …. ။ ဒါနဲ့ပဲ …. ကျွန်မလည်း .. မစူးစမ်းလိုက်ရဘူး .. ဟိဟိ … ။
အားလုံးရဲ.အတွေ.အကြုံ နဲ. သုံးသပ်ယူဆချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးပဲ ။များသောအားဖြင်.တော.
သဂျီး ပြောသလိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ. ဂီဂီ ပြောတဲ.ပညာတွေကလဲ အရှေ.ေ၇ာ အနောက်ရော လက်ခံကြမှာပါ ။
မအိတုန်ပြောသလို စိတ်တန်ခိုးကတော. ကျင်.ယူလို.ရမရမသိပေမဲ. စိတ်ခွန်အားချင်းမတူကြတာတော.
တွေ.ဘူးတယ် ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်.ခလေးတွေအတွက်တော. သတိထားစရာပေါ. ။
ဖရဲ ရေ …ဟင်းစားတော.မတို.ရဲပါဘူးကွယ် …ကြောက်ကြောက် ….
ကိုပေရဲ. မုန်ညှင်းဆီက ဒီရာသီနဲ.ဆို သေမှာဘဲ ဟဲဟဲ …။အိမ်မြှောင် ဆောင်ရင် ပုတ်စော်နံမှာဘဲ …။
ဘာဘေးရီးယန်း မျိုးနွယ်စု တွေရှိသေးတယ်ဗျ…
သူတို့က မှော်ပညာတွေ ပြီး နေကြတာ…
ကျင့်ယူလို့ ရတယ်ပေါ့ဗျာ …
ဒီပညာ လိုက်စားသူတွေမှာလည်း ပြီးကြတာ ရှိပါတယ်…
သို့သော် ဘာဘေးရီးယန်း တွေရဲ့ ထူးခြားချက်က ….
သူတို့သည် ပြီး သော်လည်း သူတို့ကတော့ မှော်ပညာကို လုံးဝမတက်ဘူးဗျ
တကယ်တော့ သဂျီးဟာ… သဂျီးဟာ…. ကျုပ်လိုပဲ …
ကိုဂီရေ .. ဘယ်သူတွေ .. ဘယ်လိုပြောပြော … မြန်မာနိုင်ငံသား ထဲမှာလည်း..ရှမ်းတွေရဲ့ .. စုန်းဆိုတာလည်း နာမည်ကြီးပဲနော် … ။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ .. ၀မ်းတွင်စုန်းလား .. ဘာလားပဲ … အမေမှာ ပညာတတ်လျှင် ကိုယ်ဝန်လွယ်တဲ့အချိန် ကလေးမှာကတည်းက .. ဘာမှ ကျင့်စရာမလိုပဲ ပါလာတတ်တယ်ဆိုလားပဲ … ။
အနောက်တိုင်းမှာလည်း ၀မ်းတွင်းစုန်းအယူကို .. လက်ခံကြပါတယ် …
အခုကြည့်နေတဲ့ စီးကရက်ဆိုင်ကယ် စီးရီးမှာလည်း … ၀မ်းတွင်းစုန်းလေးတွေ အကြောင်းရိုက်ထားတာ .. ဟုတ်ဟုတ် ..မဟုတ်ဟုတ် ..ကြည့်လို့တော့ကောင်းသားရယ် အဟီး
မိတ်ဆွေကြီး ဂီဂီ ကမက်ဂျစ်ရှင်တွေအတော်စိတ်ဝင်စားသကိုး …။
ဒီလိုလုပ်ဗျာ … နိုင်ငံရပ်ခြားက မက်ဂျစ်ရှင် အကြောင်း ပို.စ်တစ်ခု တင်ပေးပါလား ။
ကျုပ်တို.လဲ ဗဟုသုတရ ၊ ဆွေးနွေးလို.လဲရတာပေါ. ။ပြည်တွင်းဂမ္ဘီရနဲ.ပတ်သက်ရင်
ဆရာထက်ဝေးနဲ. နောက်ထပ်မသိသေးတဲ.မန်ဘာတွေလဲရှိဦးမှာပါ ၊။မအိတုန်တို.လဲ စိတ်ဝင်
စားကြမယ်ထင်တယ် ။။ လုပ်ပါ ကျွန်တော်စောင်.နေပါ.မယ် …..။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ တို့ဆေးအလိမ်ခံရသူတွေကတော့ အများအားဖြင့် လောဘစိတ်ကြောင့် ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေပါပဲ။ တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားရတဲ့လူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အသိတစ်ယောက်ဆိုရင် အိမ်ပေါ်အထိကို တို့ဆေးနဲ့အတို့ခံရတာတောင်ရှိတယ်ဗျ..။
ဘယ်လိုလည်းတော့မသိဘူး။ ခရီးသွားရင်ရထားပေါ်တို့ ကားပေါ်တို့မှာတော့ သူများတိုက်တဲ့ရေ၊တို့ မုန့်တို့ ကွမ်းတို့ မစားရဲကျတော့တာများတယ်။ ဒါကတော့ တို့ဆေးထက် အိပ်ဆေးများဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူး။
Magician Dynamo လို စိတ်ညှို့ပညာ လားမသိဘူး။
တစ်မြို့ လုံးကရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေအားလုံးတစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်ပြီးတို့ ဆေးပညာသုံးခါ